Uyifumana njani iSiri ngeendlela ezimfutshane zekhibhodi kwiMacOS ePhakamileyo yeSierra | Ndisuka mac
USiri namhlanje ngomnye wabancedisi abagqibeleleyo ngaphandle. Kwaye kuzo zonke izixhobo ze-Apple ezikhoyo (i-iPhone, i-iPad, iiMacs, iApple Watch, okanye iAppleTV)
Namhlanje, ngeSierra ePhakamileyo, USiri unempawu zakhe apho unokufikelela khona nakuphi na ukukhangela kunye nombuzo onokucinga ngawo. Ukongeza, kukho iindlela ezininzi zokufikelela kwesona sincedisi somntu sisebenzisa ikhibhodi. Makhe sibone ukuba zintoni.
Sisebenzisa iindlela ezimfutshane zekhibhodi, sinokwenza imisebenzi emininzi kwi-Mac yethu. Inomdla kakhulu esingafanele siyilibale yindlela yokubiza uSiri. Ngenxa yoku, sineendlela ezahlukeneyo. Fikelela ngokulula Ukhetho lwenkquboCofa apha Ukufikeleleka, kwaye uye kuseto Siri.
Apho, ukuba sicofa "Vula ipaneli yokukhetha yeSiri ...", sinokutshintsha iiparameter ezahlukeneyo ezinomdla, Njengelizwi lomncedisi wethu (owesilisa, owasetyhini, ..) okanye iindlela ezahlukeneyo zolawulo lwee-keyboard. Kule meko, ngokungagqibekanga, iMac yethu inezi zinto zilandelayo:
Gcina iqhosha "Command okanye CMD" indawo.
Cinezela kwaye ubambe «Option» iqhosha + indawo.
Cinezela kwaye ubambe «Umsebenzi okanye fn» iqhosha + indawo.
Sebenzisa indlela elula kakhulu kuwe. Ngokukhetha ngokwezifiso, unokwenza umyalelo okhetha ukukhetha kunye nokusebenzisa uSiri ngokukhawuleza nangokulula. Ungathandabuzi ukuziqhelanisa nokusetyenziswa kwezi ndlela zimfutshane, ziluncedo kakhulu xa usebenza kwi-Mac yakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Uyifumana njani iSiri ngeendlela ezimfutshane zekhibhodi kwiMacOS ePhakamileyo yeSierra
Ividiyo enkulu yeAmazon yeApple TV inokukhutshwa ngo-Okthobha u-26